Wafdi ka socda baarlamanka Turkiga oo booqasho ku tegay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wafdi ka socda baarlamanka Turkiga ayaa maanta booqasho ku tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyey guddiga xiriirka saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo Turkiga ee baarlamaanka Soomaaliya.
Booqashada wafdiga ka socda baarlamaanka Turkiga ee dalka Soomaaliya ayaa ah mid salka ku heyso sidii loo xoojin lahaa xiriirka baarlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga.
Wefdigan ayaa waxaa hogaaminaayay Guddoomiyaha Guddiga Xiriirka Saaxiibtinimada Barlamaannada Turkiga iyo Soomaaliya ee Wadanka Turkiga Haliil Urur, kaas oo barqanimadii maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Soo dhaweynta kadib ayaa xubnaha labada Barlamaan Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ay kulan is xog wareysi ah ku yeesheen qeybta nasashada ee Garoonka Aadan Cadde.
Gudoomiyaha guddigga xiriirka saaxiibtanimada Barlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga ee Wadanka Turkiga Haliil Urun ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay imaanshihiisa Soomaaliya isla markaana fursad weyn u tahay xoojinta xiriirka labada Barlamaan.
Xildhibaan C/qaadir Macalin Nuur oo ah gudoomiyaha guddiga xiriirka saaxiibtinimo Barlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga ee dhanka Soomaaliya ayaa sheegay in imaatanka wefdigan ay la xiriirto sii ambaqaadida wadashaqeynta labada Barlamaan.
Barlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan sameeyay gudiga qaabilsan xiriirka Barlamaanada Soomaaliya iyo Turkiga, iyadoo horay baarlamaanka Turkigu u sameeyey guddi nuucaas ah.